Hoe namono dahalo… : noravan’ny zandary ireo olona nanao fihetsiketsehana tao Moramanga | NewsMada
Hoe namono dahalo… : noravan’ny zandary ireo olona nanao fihetsiketsehana tao Moramanga
Par Taratra sur 09/02/2017
Olona teo amin’ny 30 eo ho eo, araka ny filazan’ny zandary, no nitondra baoritra nisy soratra: “Raha ny dahalo no arovana, tsy manaiky izahay”, tany Moramanga, teo anoloan’ny kolejy St Jean de Matha, ny alatsinainy teo. Araka ny fanazavana azo, olona avy any Mahadina, kaominina Ambohibary, ireo, izay nisy tamin’ireo ny nanaovana fanadihadiana momba ny famonoana dahalo tany an-toerana, ny faran’ny volana janoary lasa teo. Fantatra fa dahalo vao avy nisazy izy io, ka rehefa nifanojo tamin’ny fokonolona, niharan’ny fitsaram-bahoaka ka maty. Taorian’izay, nisy ny fanadihadiana nataon’ny zandary momba ny fahafatesan’ity voalaza fa dahalo, ka nanaovana fakana am-bavany ny olona maromaro. Nahatonga ireo olona avy any Mahadina tezitra izany ka izao tonga tany Moramanga izao nanao fihetsiketsehina.
Noravan’ny zandary avy hatrany ireo andian’olona tany Moramanga ireo ka niparitaka taorian’izay. Tsy nanohitra rahateo izy ireo teo anoloan’ny zandary maro nirongo basy. Nisy ny fiantsoana “renfort” nataon’ny mpitandro filaminana taorian’ny fandravana ny amin’ny mety hiverenan’ireo mpanao fihetsiketsehana. Nampitangorona olona tany Moramanga ny hetsika ka natahorana sao misy ny manararaotra hanakorontana.
14 ny efa matin’ny fitsaram-bahoaka
Hatramin’ny fiandohan’ny taona no ho makaty, nahatratra 14 ny isan’ny olona matin’ny fitsaram-bahoaka teto amintsika. Azo lazaina fa marobe izany isa izany, raha nitovitovy tamin’io ny isan’ny matin’ny fitsaram-bahaoka ny taona 2016. Raha tsy voasoroka ity resaka fitsaram-bahoaka ity, mety ho intelon’io isa io no hitranga hatramin’ny faran’ny taona.
Raharaha sarotra ny mifehy azy satria hatezeram-bahoaka ny mahatonga azy io amin’ny anakapobeny. Misy lonilony mavesatra any amin’ny olona any ary vaky rehefa misy ny azo amoahana izany. Ny tena loza, hatramin’ny mpitandro filaminana aza, tafihin’ny olona noho izay resaka fitsaram-bahoaka izay. Mety hiharan’izany hatramin’ny mpitondra ambony ihany koa, raha tsy misy ny vahaolana avy amin’izy ireo, indrindra amin’ireto karazana krizy mianjady amin’ny vahoaka ireto: ny delestazy, ny tsy fandriampahalemana, ny fiakaran’ny vidin’entana rehetra. Loza mitatao ho an’ny fitondrana ny fitsaram-bahoaka.